कृष्ण पहाडीज्यू, प्रधानमन्त्री कसरी नैतिक रुपमा च्युत देख्नुभयो ?
Wednesday, 25 Sep, 2019 10:30 AM
प्रसिद्ध मानव अधिकार कर्मी तथा नागरिक अभियन्ता कृष्ण पहाडीको ०७६ असोज ५ गते एक राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित माफ गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू शीर्षकको लेखमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समेतलाई मनोगत असंयमित कटुकटाक्षको प्रतिवाद गर्नै पर्ने अवस्था देखेर नलेखी रहन सकिएन ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका नातिको ब्रतबन्धको निम्तामा राष्ट्रपति गएको अनि राष्ट्रपति पुत्रीको विवाहमा पूर्व राजा शाह निम्तालुका नाताले सहभागी भएको अतिसामान्य औपचारिक, सामाजिक विषय र सम्बन्धलाई आधार बनाएर पहाडीजीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शाहसित चिप्ला कुरा र व्यवहार गरेको भन्न सुहाउँछ ?
उपर्युक्त चिप्ला शब्दले कसैलाई फकाउन र कसैको अति चाकरी गर्ने अर्थ र सन्दर्भ बताउँछ । अनि राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थाले शाहसित यस्तो गरेको भन्ने मनगढन्ते अर्थ आशय व्यक्त गर्न पहाडीलाई सुहाउँछ रु अझ यतिले पनि चित्त नबुझेर पहाडीले राष्ट्रपतिको गम्भीर, शालीन र सौम्य व्यवहारलाई ठस्सा भनेर भद्दा आरोप लगाउनु भएको छ । के राष्ट्रपति जस्तो देशको प्रमुख नागरिकले चुलबुले, चन्चले, सतही हाउभाउ र कटाक्ष गर्नु र देखाउनु पर्ने हो र?
संसारका कुनै पनि देशको राष्ट्र प्रमुखलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ । यो व्यवस्था सामान्यतया जल,जमिन र आकास जस्ता आवागमनका क्षेत्रमा पनि हुने गर्छ । यो भनेको राष्ट्रको मर्यादा,सुरक्षा र गरिमाकै विषय हो । अनि गोयवल्स शैलीको दुष्प्रचारबाजीकै भरमा राष्ट्रपतिप्रति मनोगत अलाप र विलाप गर्न विज्ञ भनिने जनलाई किमार्थ सुहाउँछ र ?पहाडीले त राष्ट्रपतिलाई आजका मितिसम्म अलोक प्रिय हुनु भएको पनि भन्न भ्याउनु भएको देखिन्छ । तर एकाध अपवाद बाहेक पूर्णतः संवैधानिक रुपमा रहेको राष्ट्रपति सामान्य र सस्तो लोकप्रियता र अलोकप्रियता भन्दा माथि हुन्छ ।
राष्ट्रपतिको लोकप्रियताको चिन्ता गर्ने पहाडीले जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरमा जानु भएकी एकल महिला पहिचानकी राष्ट्रपतिप्रति त्यसबेला गरिएका घृणित तथा निन्दनीय तुच्छ आक्षेपपूर्ण वचनका विरुद्ध कहीँ प्रतिवाद गर्नुभयो ?
राष्ट्रपति कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सडक जाम गरेको आरोप र फतुर लगाइन्छ अनि राष्ट्रपति भवनमा नै कार्यक्रमको आयोजना गर्दा अमुक एक कलाकार भनिने व्यक्तिले प्रायोजित रुपमा राष्ट्रपति प्रति भद्दा लान्छना लगाउन खोजेर आफैँलाई लाज, घीन र सरमहीन अवस्थामा पारेर खसालेको पहाडीजीलाई सम्झना होला । अझै अगाडि बढेर पहाडीले राष्ट्रपतिको आलोचना र निन्दा गरे पनि यसलाई गणतन्त्रकै विरोध भन्न नसकिने बताउनु भएको छ । राष्ट्रतिलाई निन्दा नै गर्नु पर्ने कुनै कारण भए तथ्य र तर्कका साथ आउनु पर्छ । आदत र आग्रहका दासहरुकै अरोप र लान्छनालाई कसैले पत्याउँदैन ।
पहाडीजीले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकमा प्रतिगमनको खतरा रहेको भनेर सरकारका कमजोरी लुकाउन खोजेको बताउनुभयो । यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको संदिग्ध चरित्रसित जोडेर पनि हेर्नुपर्छ । आफैँ सरकार प्रमुख हुँदा बनेको संविधान भनेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका ५० प्रतिशत महासमिति सदस्य सहित पार्टीका महामन्त्री समेत धर्म विषयमा संविधान संशोधनको मुद्दामा खुल्ला बहस गरिरहेको विषयको अन्तर्यमा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संदिग्ध रुपमा हिन्दू धर्मको विषय उठान गर्ने काङ्ग्रेसी नेताले राजतन्त्रको पुनस्थापनाका विषयमा पनि जिब्रो चपाउनु हुन्न भन्नु भएको छ ।
भोलिका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस सित धर्म बाहेक अरु कुनै चुनावी प्रमुख मुद्दा हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि आजैदेखि यो विषय उठाउँदै भोलि ऐन मौकामा हिन्दू धर्मको एजेण्डा पार्टीले उठाउने कसरत अहिलेदेखि सुरु गरिएको त होइन ? तुलनात्मक रुपमा हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका सबै शासन कालको भन्दा देश र जनताको हितमा नेकपाको शासन काल हरेक हिसावले उल्लेख्य रहेको जग जाहेर छ । विगत नौ महिने भनौँ वा अहिले ओली सरकारसित तुलना गर्दा स्पष्ट हुन्छ । पहाडीजीले तथ्य र तर्कबिना नै प्रधानमन्त्री ओली नैतिक रुपमा च्यूत हुँदै गएको भन्नु भयो । ०४६ सालपछि पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पहिलो शासन कालमा आम जनताले एक पैसो बराबर जन राहतको अनुभूति गर्ने र गराउने काम गरेको थिएन ।
कोइराला सरकारले निजीकरण र उदारीकरणका नाममा दातृ राष्ट्रहरुले नेपाललाई उपहार स्वरुप दिएका सयौँ उद्योगधन्दाहरु माटोका भाउमा बेचेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो छँदाखाँदाको निर्विघ्न एकमना बहुमतको सरकार र सदन आफैँ गिराएर तमासा देखाउनु कुन नैतिकता हो र थियो ? भारतसित टनकपुर सन्धी गरेर त्यसलाई सम्झौता गरेको भनेर देश र जनतालाई सफेद झुट र ढाँट कुरा गरेको तत्कालीन सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कस्तो नैतिकता जाहेर हुन्छ, पहाडीज्यू ? न्यायपरायण पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने नैतिकवान् हुने अनि त्यस खालका तमाम कुरुप कृत्यका विरोधी चाहिँ अनैतिक हुने तपाईंको कुन नैतिक परिभाषा हो पहाडीजी ?
भारतले गरेको नेपाल नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्ने पार्टी र तिनका मतियारले ओलीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन सुहाउँछ ? नेपालको संविधान जारी गर्न आयातीत भीषण दवाव थेगेर र थामेर संविधान जारी नभएको भए यो देश कुन भड्खालामा जान्थ्यो होला पहाडीजी ? नेपाली सित विवाह गरेर आउने छिमेकी चेलीलाई भोलिपल्टै अङ्गीकृत नागरिकता दिलाउन लागि पर्नेले राष्ट्रवादको कुरा कथुर्न सुहाउँछ ? पहाडीजीले ओली सरकारले अनुगमन माथि अनुगमनको प्रावधान राखेर सबै खालका अनियमितता रोक्ने काम र कदम पहिले कहिल्यै सुन्नु भएको थियो ?
उहिलेदेखि जदहरुको मिलिभगतमा बालवाटार जग्गा प्रकरणको छानबीन यही सरकारले सुरु गरेको हुँदा पहाडीजीले थाहा पाउनु भएको होइन र ? ओली सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता जन्य कामलाई जरैदेखि निर्मूल पार्ने योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको देखिन्छ । अहिले भ्रष्टचारीहरु आफैँ इहलोक परित्याग गरिरहेका छन् । ठग ठेकदारहरुका मस्ती गलिरहेको देखिन्छ । ठेक्काका कामहरु अब निश्चित अवधिभित्र पूरा गर्ने वाध्यता सरकारकै कारण सुरु भएको छ । तराईमधेस र पहाडमा समेतका कथित मधेसी र जनजातिका हक हितका नामममा घरघरमा हुर्हुरी बलेका र बालेका आन्दोेलनका धुनीहरु अहिले किन हराए र बिलाए ?
तराइमधेसमा राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी अखाडाहरु अहिले कहाँ कुन दुलामा पसे ? ओली सरकारका कारण सदियौँ देखि देश र जनतामा व्याप्त घनीभूत निराशाका काला बादल अहिले हट्तैछन् र आशा,विश्वास र भरोसा पलाउन थालेको अवस्था छ । कतै यही रिसमा कसैले आगो त ओकली रहेको छैन रु शत्रुलाई कहिल्यै पनि कमजोर ठान्नु हुँदैन । त्यसमा पनि नेपाल जस्तो सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील देशमा भित्रभित्रै देशी र विदेशीहरु निरन्तर ओली विरुद्ध मात्र होइन नेपालकै विरुद्ध लागि रहेका हुन्छन् ।
नडराउनु तर डर राखेर काम गर्नु पर्छ । २०७६ भाद्र २७ गते राष्ट्रपतिको विरुद्ध कालो झण्डा,व्यानर र लुगा सहित प्रदर्शनको तयारीमा पूर्व डिआइजी विजयराज भट्ट र पूर्व मेजर केशव बस्नेत सहित २४८ जना को डप्फा काठमाडौँमा पक्राउ पर्नु सामान्य विषय हो र ?
नेकपामा सैद्धान्तिक कार्यदिशा लगायत आन्तरिक विषयमा भँुमरीमा परेन भने आगामी निर्वाचन नेकपाकै पोल्टामा जाने निश्चित देखिन्छ । तर आफ्नै आङ कन्ज्याएर छारो उडाउन उद्यत तथा भँडार खनेर आँगन पुर्न तम्तयार केही नेताका कारण नेकपाको भविष्यबारे अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक कार्यक्रममा पार्टी र सरकार का विरुद्ध असंसमित विचार व्यक्त गर्ने केही नेताहरुलाई छास्नु भएको थियो । उहाँले पेटिबुर्जुवा वा निम्नपुँजिवादी चेत,चरित्र र चरित्रका पार्टीमा देखापरेको समस्या हो भन्नु भयो ।
पहाडीजीले ओलीले गणतन्त्रलाई गफ र हावादारी कल्पना भनेर अनकौँ पल्ट कल्पना भरेर प्रलाप गरेको बताउनु भएको छ र यस्तो अभिव्यक्ति केही महिना अघि नेका नेता नरहरि आचार्यको कृति विमोचन समारोहमा पनि पहाडीले गर्नु भएको थियो ।
यस लेखकको ०६२,०६३ को पूर्व नै जब सम्म गणतन्त्रका सबालमा काङ्ग्रेस पार्टी विधानमा नै परिवर्तन गरेर अगाडि आउन सक्तैन तब सम्म गणतन्त्रको मुद्दा सबल बन्न सक्तैन भन्ने सन्दर्भमा आएको त्यतिबेलाको ओली अभिव्यक्ति हो तर रप्फूकारहरु टालाटुली बटुली भाङ्ग्रो सिलाएर तमासा गरिरहेको देखिन्छ । सूर्य चन्द्र रहुन्जेल हुन नसक्ने ठानिएको चीनसित पारबहन सन्धी पनि ओलीकै पालामा सम्पन्न भएको होइन र रु यो विषयले भारतीय राजनीतिक बजार अझै गर्माएकै देखिन्छ । देउवाले झैँ ओलीले मोदी समक्ष संविधान संशोधनबारे विनम्र बिन्ती बिसाएको त होइन । ओली आगमन सँगै संसदमा प्रायोजित गरिएका अनेक रुप,रङ्ग र ढङ्गका ककसहरु बिलाएका होइनन् ?
ओलीले विशेषतः छिमेकी राष्ट्रसित परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध पहिले कहिल्यै नभएको समदूरी र मैत्री सम्बन्ध विकास भएको धेरै उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । पहिले ग्याँस र पेट्रोलियमको भाउ बढेको मात्रै अनुभव हुन्थ्यो तर अहिले विश्व बजार भाउका अनुपातमा मूल्य घट्तो पनि रहेछ भन्ने जनतालाई आभास हुन थालेको छ । भोकमरीले अहिले जनता तड्पिएको सुनिएको छैन । जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर कोही मरेको पनि सुनिएको छैन । यही सरकारका पालमा ७.१ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि भएको छ । सुनकाण्ड लगायत अनेक कृत्यमा सामेल,मतियार,अदालत र अख्तियारहरु कार्यबाहीमा पर्दै छन् । अख्तियारले सुनकाण्डका ७५ जना हिरासतमा राखेर खोजबिन जारी राखिरहेको छ । समग्र तुइन विस्थापित हुने अन्तिम चरणमा रहेको देखिन्छ । हावाबाट बिजुली बलिरहेको छ ।
सरकार र सरकारसित सम्बन्धित कुनै पनि निकाय सबैले आआफ्ना जिम्मेवारीलाई इमान्दारी र कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नै पर्ने नीति, नियम र पद्धति सुरु हुँदैछ । सशस्त्र युद्धका लहड र रहरहरु धमाधम हतोत्साहित हुँदै छन् । विनाशकारी हावाहुरीबाट बारा र पर्साका स्थानीय बासिन्दाका ८६९ घर लागत अनुमान भन्दा एक लाख घटीमा नेपाली सेनाले तयार गरेर जिम्मा लगाएको काम जनहितको काम होइन । अनि प्रधानमन्त्री ओलीमा कसरी नैतिक रुपमा च्युत देख्नभयो रु पार्टीको भाषा बोल्ने नेता र पार्टीहरु मनग्गे छन् । सन्त,महन्त तथा स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले पार्टीकै जस्तो आवेश र उत्तेजनाको भाषा बोलिरहनुपर्छ र ?
सत्य,तथ्य र सही विषयमा आधारित भएर मात्र लेखौँ । सकार नकार दुवै पक्ष प्रवाहित गरौँ । देशलाई नै दिशा निर्देश गर्ने गरी लेखौँ । तपाईले लेखमा उठाएका केही विषय यस लेखकको जानकारीमा नभएको र केही भने सही भएकाले मौन भइयो तर प्रतिवाद गर्नै पर्ने भएकाले यो लेख लेख्न बाध्य भएकामा माफ गर्नुहोस् कुष्ण पहाडीज्यू,